रोचक – Page3– Karnalikhabar
यो संसारमा जंगलको कमी छैन यद्यपि पछिल्लो समयमा वनविनास चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । तपाईंले विशाल तथा अग्ला अग्ला रुखहरुका जंगल प्रशस्तै देख्नुभएकै होला । तर के तपाईंले सबै रुखहरु ९० डिग्रीमा बांगिएका बांगे जंगल देख्नुभएको छ ?
नेपालमा सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनादेखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति अबलम्बन गरिएको थियो ?
नेपालमा सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनादेखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति अबलम्बन गरिएको थियो ?लोक सेवा
भारतको राजधानी दिल्लीभन्दा ३ सय किलोमिटर टाढा राजस्थानको अलवरमा एउटा पूरानो किल्ला छ । यो किल्ला अहिले भग्नावशेषको रुपमा रहेको छ । यो खण्डहरु कुनै समयमा भने एक भव्य तथा मानिहरुले भरिएको क्षेत्र थियो । यो इलाकामा सोमेश्वर,
रवि सप्तमी र आइतवारको व्रतकथा
प्रकाशित मिति : आइतवार, साउन १५, २०७४
आइतबार र सप्तमी तिथिको संयोग परेको दिनलाई रवि सप्तमी भन्ने गरिन्छ । यस दिन भगवान सूर्यनारायणको पूजा, अर्चना र व्रत सम्पादन गर्ने गरिन्छ । चराचर जगतका प्रकाशक देवता हुनाले सूर्यलाई सविता भन्ने गरिन्छ । गायत्री मन्त्र तिनै
कट्टर मुस्लिम देश साउदी अरबको प्रसिद्ध मस्जिदमा भेटियो विस्वासै नलग्ने कुरा ।।।यो खोलेर पुरा हेर्नुहोस्
अहिले सोशल मिडियामा खुब हलचल मच्चिएको छ । धेरै मानिसहरु यस्तो फोटो शेयर गरिरहेका छन् । जसमा अबरको सबैभन्दा पुरानो मस्जिदमा एक शिललिंग र साँढेको आकृति बनाइएको छ । यो फोटो ह्वाटस् अप देखि फेसबुक सहितका सामाजिक संजालमा व्यापक
५२ बर्ष अगाडीको बुढोपोखरी…
बि.स २०२२ सालमा खिचिएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरमा अवस्थित बुढोपोखरी । धौलागिरि अञ्चलमै पहिलो पटक सन् १८४० मा निर्माण गरिएको पहिलो मानवनिर्मित पोखरीको रुपमा समेत चिनिने पोखरी आसपासको दृष्य अहिले पनि उस्तै
एजेन्सी-परम्परागत मान्यता के छ भने पुरुषहरू आफ्ना श्रीमती अथवा अविवाहिता साथीलाई बढी धोका दिने गर्दछन् । हामीले पनि देखेका छौँ कि वरपरका हाम्रा केटा हुन् या केटी साथीले उनका पार्टनरहरूलाई धोका दिएको । इलिसिट इन्काउन्टर्स
रोचक तथ्थ ! ११ बच्चालाई १७ मिनेटमानै एक महिलाले जन्माईन !
इन्डियानामा एक ४२ वर्षकी महिलाले एकैपटक ११ बच्चाहरुलाई जन्म दिएकी हुन् । ति सबै बच्चा सुरक्षित र तन्दुरुस्त छन् । यो डेलिभरीको केस हेरेपछि अस्पतालको सबै डाक्टर अचम्ममा परेका छन् । मारिया हर्नान्डेजको डेलिभरिको लागि धेरै
तनाव कसरी नियन्त्रण गर्ने !
प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन १२, २०७४
हिजोआज सबैको मुखमा एउटै शब्द झुण्डिने गरेको छ– मलाई टेन्सन छ । मानिसहरु कति सजिलै आफ्नो तनावलाई ठ्याक्कै भन्न सकेका होलान् तर भन्न सहज हुने, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने तनावकै कारण संसारभरि गम्भीर किसिमका रोगीको संख्या थपिदै
- माधव बस्नेत नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाका पुत्र शशांक कोइराला, जो कांग्रेसका महामन्त्री हुन्, को टोखास्थित निवासमा ४ साउनमा एउटा रोचक साइत जुर्‍यो । त्यहाँ शशांकका अतिरिक्त उनका केन्द्रीय सदस्यद्वय दाइ शेखर